GNOME 41.5 iri pano sechigadziriso chekugadzirisa tsikidzi | Linux Addicts
Nhasi vari kutarisirwa kuburitsa GNOME 42, desktop iyo Fedora 36 ichashandisa uye Ubuntu 22.04. Ichave inogadziridza ine inonakidza kuvandudzwa, pakati pezvandaizosimbisa iyo skrini yekushandisa iyo inobvumidza iwe kutora "mafoto" uye kurekodha kwedesktop. Asi hazvisi zvese zvekugoverwa kweLinux zvichagadziridzwa kana vangoburitsa iyo vhezheni itsva, uye parizvino hapana vhezheni tsiga iri kutoshandisa GNOME 42. Hongu, vari kushandisa yapfuura, kureva, the yakaburitswa munaGunyana 2021, izvo zvisiri mumwe kunze GNOME 41.
Mumaawa ekupedzisira takave neaviri ekugadzirisa edesktop inonyanya kushandiswa munyika yeLinux: kune rumwe rutivi, ikozvino iripo GNOME 41.5, yechishanu poindi yekuvandudza kune yazvino vhezheni yedesktop; Kune rumwe rutivi, chirongwa akakanda GNOME 40.9, inotova yechipfumbamwe yekugadzirisa vhezheni yeGNOME iyo yakaburitswa munaKurume 2021, iyo yakaunza zvitsva zvinokatyamadza semasaini epaneti yekubata.
GNOME 41.5 uye 40.9 i "bugfixes"
GNOME 41.5 yave kuwanikwa. Iyi igadziriso yakatsiga yebug yeGNOME 41. Yese masisitimu anoshanda ane GNOME 41 anokurudzirwa kugadzirisa. [
Iyo purojekiti inonyora iyi yekuvandudza seinofinha, asi zvine musoro: haiunze chero hutsva hutsva, saka hapana zvakawanda zvekunyora kumba nezvazvo, uye ndiyo yechishanu poindi yekuvandudza kuGNOME v41, saka hapafanirwe kunge paine hombe. zvinoshamisa kana. Kubva kuGNOME 40.9, vanoti:
GNOME 40.9 yave kuwanikwa. Iyi igadziriso yakatsiga yebug yeGNOME 40. Yese masisitimu anoshanda ane GNOME 40 anokurudzirwa kugadzirisa. […] GNOME 40.9 ndiyo yazvino bug kugadzirisa update yeGNOME 40. GNOME 40 yasvika kumagumo ehupenyu hwayo, uye haichagamuchire zvimwe zvigadziriso. Yave nguva yekusimudzira kuGNOME 41 kana GNOME 42 (inoburitswa mangwana).
Kune avo vasina kurodha, kunyangwe iri meseji inoitirwa zvakanyanya kune vanogadzira pane vashandisi, zvinokurudzirwa kuzviita izvozvi, sezvo GNOME 40.9 iri. yakanyorwa seEOL, ndiko kuti, pamwe nayo kuguma kwehupenyu hwenheyo yakatevedzana inosvika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME 41.5 iri pano sebugfix update, uye inosvika padivi peGNOME 40.9, iyo yazvino gadziriso mune ino nhevedzano.
Debian 12 "Bookworm" Yemahara Zuva Rakaburitswa